Kenya oo sheegtay Duqeyn dhanka cirka ah inay ku dileen dagaalyahano Shabaab ka tirsan – STAR FM SOMALIA
Sida uu qoray maanta oo Sabti ah Wargeyska The Star ee ka soo baxa dalka Kenya ciidamada Kenya oo isticmaalaya diyaaradaha dagaalka ayaa fuliyay duqeyn dhanka cirka ah oo lala eegtay Saldhigyo Shabaabka ay ku leeyihiin Gobolka Gedo.
Duqeyntaan ayaa la sheegay ciidamada KDF inay la eegteen Saldhig Shabaabka ay ku leeyihiin meel ku dhaw Degmada Baled Xaawo ee Gobolka Gedo.
Waxaa la sheegay Diyaaradaha dagaalka Kenya inay duqeeyeen Saldhigaasi, xilli dadka deegaanka ay qarinayeen xubnaha Shabaabka ka tirsan sida Saraakiisha Kenya ay sheegeen.
Ciidanka dowladda Kenya ayaa xaqiijiyay in ay dileen tiro dagaalyahano ah oo ka tirsan shabaab in kastoo aysan shaacin cadadkooda.
David Obonyo Afhayeenka ciidamada Millateriga dalka Kenya ayaa sheegay in Duqeyntaasi ay ku bur buriyeen hub Shabaabka ay lahaayeen oo lagu haayay deegaanka Duqeynta ay ka dhacday.
Waxa kale uu sheegay in Diyaaradaha dagaalka Kenya ay sii wadi doonaan Duqeymaha ay la eeganayaan Xarumaha Shabaabka ay ka joogaan Gobolka Gedo.
Al Shabaab ayaa muddooyinkii dambe waxa ay fulinayeen weeraro kala duwan oo ay la eeganayeen ciidamada dalka Kenya ee ku sugan gudaha dalkaasi.